Saddex sano ka hor dhiibistii Qalbi Dhagax | Keydmedia
Saddex sano ka hor dhiibistii Qalbi Dhagax
Maanta oo kale saddex sano ka hor (28 Agosto 2017) waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho laga dhoofiyay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi dhagax oo ka mid ahaa Saraakiishii ONLF oo muddo ay doon dooneysay Itoobiya, dowladda Soomaaliya ayaa xilligaas u gacan gelisay dowladda Itoobiya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Tallaabada dowladda Soomaaliya ugu dhiibtay Itoobiya C/kariin Qalbi Dhagax waxaa ka carooday shacabka Soomaaliyeed oo u arkayay dhiibitaankaas mid gardaro ah, si adagna uga soo horjeestay.
Magaaalada Muqdisho oo ah halka laga dhiibay Qalbi Dhagax iyo meelo kale oo ka mid ah dalka ayaa waxaa xilligaa ka dhacay dibax baxyo looga soo horjeeday kiiskaas, iyadoona dowladda Farmaajo ay arintaas ku noqotay nabadr aan weli la booga dhayin.
Dowladda oo xilligaas ka cabsaneysay kacdoon shacab ayaa bilowday fariimo marin habaabin ah oo dadka looga weecinayay wararka ku saabsan dhiibitaanka Qalbi Dhagax, waxaana Baraha bulshada ka bilowday sheekooyin ay maal gelisay Villa Somalia oo arintaan lagu burinayo, islamarkaana weji kale loogu rogayo.
Shirkii Golaha Wasiirada oo maalmo kadib la qabtay, arintaana looga hadlay ayaa lagu shaaciyay in dowladda Soomaaliya Jabhadda ONLF u aqoonsantahay "Argagixiso" dhibaato ku ah dhulka Soomaalida iyo gobolka, taasoo cirka sii gelisay Kiiska Qalbi Dhagax.
Mas'uuliyiin lagu eedeeyay in ay kiiskaan wax ka ogaayeen maalintaas ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalooshe taliyihii hay'adda NISA iyo Raiisul wasaare Kheyre, oo labadaba hadda ka maqan masraxa siyaasadda Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo.
Dowladda Farmaajo ayaa taageeradii ugu badnaa ku weysay dhiibitaanka Qalbi Dhagax, waana markii u horeysay ay Dowladda Soomaaliya ay dal kale u gacan geliso Muwaadin Soomaali ah, marka laga soo tago Maamulada ka jiray Gobolada dalka oo qaarkood horay ugu gacan geliyay Itoobiya Muwaadiniin Soomaali ah.